ENWERE M IKE IJI KỌMPUTA DỊ KA TV? - ỊCHỌTA íGWè - 2019
Kọmputa nwere ike iji ngwa ngwa dị ka TV, ma e nwere ụfọdụ nuances. N'ikpeazụ, e nwere ọtụtụ ụzọ isi lee TV na PC. Ka anyị lelee onye ọ bụla n'ime ha, ma nyochaa uru na nkwenye nke onye ọ bụla ...
Nke a bụ console pụrụ iche maka kọmputa na-enye gị ohere ile TV na ya. Enwere taa ọtụtụ narị ihe nkiri TV dị iche iche na mbadamba, ma ha niile nwere ike kewaa n'ime ụdị dị iche iche:
1) Egwuru egwu, nke bụ obere igbe dị iche iche na-ejikọ na PC site na iji USB mgbe niile.
+: nwee ezigbo foto, na-arụpụta ihe, na-agụnye ọtụtụ atụmatụ na ike, ikike ịnyefe.
-: ha na-emepụta ihe nhụsianya, ụrọ ndị ọzọ na tebụl, ike ọkụ ọzọ, wdg, na-eri karịa ụdị ndị ọzọ.
2) Kaadị ndị nwere ike ịtinye n'ime sistemụ ahụ, dị ka iwu, na oghere PCI.
+: adịghị egbochi na tebụl.
-: Ọ bụ ihe na-adịghị mfe ịfefe n'etiti PC dị iche iche, mmalite ntọala dị ogologo, maka ọdịda ọ bụla - ịrịgo n'ime usoro usoro.
TV tuner AverMedia na vidiyo nke otu osisi ...
3) Ụdị ihe atụ nke oge a dị ntakịrị karịa mgbakọ kọmputa.
+: dị nnọọ ọnụ, dị mfe na ngwa ngwa ibu.
-: dị oke ọnụ, ọ bụghị mgbe niile na-enye ezigbo mma foto.
2. Ịchọgharị na Ịntanetị
Ị nwekwara ike ile TV site n'iji Intanet. Mana maka nke a, nke mbụ, ị ghaghị ịnweta Internet ngwa ngwa na nke siri ike, yana ọrụ (weebụsaịtị, programmụ) site na nke ị na-ekiri.
N'ikwu eziokwu, ihe ọ bụla Intaneti, site n'oge ruo n'oge, enwere obere akwụkwọ ma ọ bụ ngwa ngwa. Otu ihe a, netwọk anyị adịghị ekwe ka kwa ụbọchị na-ele telivishọn site n'Intanet ...
N'ịkọ elu, anyị nwere ike ikwu ihe ndị a. Ọ bụ ezie na kọmputa nwere ike dochie TV, mana ọ gaghị adị mma mgbe niile ịme ya. O yighị ka onye na-amaghị PC (ma nke a bụ ọtụtụ ndị agadi) nwere ike ọbụna gbanye TV. Tụkwasị na nke a, dị ka usoro, nyocha nke PC enweghi oke dị ka nke TV ma ọ bụghị nke ọma ile ihe omume na ya. A na-eme ka TV tunerị iji wụnye, ọ bụrụ na ịchọrọ ịdekọ vidio, ma ọ bụ kọmputa na ime ụlọ, obere ụlọ, ebe ị nwere ike itinye ma TV na PC - enwereghi ebe ọ bụla ...